Fitaovana fanamboarana Outlook. Rindrambaiko fanarenana Outlook. Fitaovana fanamboarana PST.
DataNumen Outlook Repair dia ny tsara indrindra Fitaovana fanamboarana sy fanarenana an'i Outlook eto amin'izao tontolo izao. Izy io dia afaka manamboatra ireo rakitra Outlook PST maloto ary mamerina ny mailaka rehetra, ny fifandraisana, ny kalandrie, ny fanendrena, ny asa, ny naoty, ny diary, posts, sns. ao amin'izy ireo araka izay tratra, ka hampihena ny fatiantoka amin'ny kolikoly fisie.
DataNumen Outlook Repair dia nantsoina taloha Advanced Outlook Repair.
Fa OST fanarenana rakitra ary OST amin'ny fanovana rakitra PST, ampiasao azafady DataNumen Exchange Recovery.
Nahoana DataNumen Outlook Repair?
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe momba ny vokatra fanarenana an'i Outlook. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen Outlook Repair manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, tsara lavitra noho ny mpifaninana hafa rehetra, ao anatin'izany ny fitaovana Fanamboarana Inbox (scannst) sy fitaovana fanamboarana PST hafa, eny an-tsena!
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen Outlook Repair mifoka ny fifaninanana
Tsy maintsy nandefa hafatra aho hisaorana ny orinasanao noho ity zavatra tsara ity Datanumen Outlook repair vokatra!
Nampiasa programa hafa aho handefasana ny fomba fijeriko
Nampiasa programa hafa aho handefasana ny fomba fijeriko (Rohy mpanaradia) ary ny findaiko sy ilay programa dia tsy mandeha amin'ny laoniny ary namafa ny angon-drakitra vaovao nataoko tamin'ny solosainako tamin'ny angona taloha tamin'ny findaiko. Tsy nanana nomaniny ho solon'izay ny fisehoana ivelany ary kivy be aho very ny fanavaozana tena lehibe ny fanamarihana. Nandany be dia be nandritra ny roa andro aho nieritreretana sy nitady fomba hanamboarana izany amin'ny alàlan'ny fomba rehetra azo atao (kinova taloha, rindrambaiko fanarenana hafa, toro-hevitra an-tserasera hafa) ary toa tsy afaka natao izany, saingy nahitana soa ihany ny Datanumen vokatra ary afaka nanamboatra / namerina ny lost -tsoratra! Tamin'ny naha-orinasa kely ahy aho ary nandalo fotoan-tsarotra sasany teo amin'ny fiainana dia kivy be aho, nalahelo, tezitra rehefa nieritreritra fa ny data ny fomba fijeriko dia nosintonina tamin'io hadisoana io ary sosotra tsy misy fomba hamerenana azy io ary tena faly aho nahita an'io Datanumen fandaharana ary miasa mba hamerenana amin'ny laoniny ny angon-drakitra misy ahy, mahavariana ary ny rindrambaiko dia nalain-tahaka sy mora ampiasaina. Orinasa lehibe tokoa ity ary te hampahafantatra ny tsirairay fotsiny fa nanatsara ny fiainam-bahoaka ho amin'ny tsaratsara kokoa !!!
Misaotra betsaka indray.
Los Angeles, CA, Etazonia
Jolay 17th, 2020
Namboarina ny rakitra hafa misy ahy, Microsoft voasokajy ho "maloto". Misaotra an-tapitrisany.
Jolay 9th, 2020
Herin'ny maizina - nametraka rakitra iray izay tsy azon'ny scanpst.exe fantarina akory ho toy ny Outlook Mailbox. Misaotra fatratra noho ny vokatra mahatalanjona.
Jona 2nd, 2020
Tiako ny misaotra anao DataNumen INC. ho an'ny fanampianao sy ny logicielanao izay tena nanao ny asany ary namela olona tsy dia za-draharaha
Tiako ny misaotra anao DataNumen INC. ho an'ny fanampianao sy ny logicielanao izay tena nanao ny asany ary namela olona tsy dia za-draharaha hamerina ny rakitra Outlook 2007 PST.
Enga anie 8th, 2020
Ny fitaovanao dia nanampy tamin'ny famerenana ny mailaky ny vadiko rehetra. Misaotra betsaka anao sy ny ekipanao iray manontolo tamin'ny nanolorana ity famonjena aina ity sy mora
Ny fitaovanao dia nanampy tamin'ny famerenana ny mailaky ny vadiko rehetra. Misaotra betsaka anao sy ny ekipanao iray manontolo tamin'ny fanomezana ity fitaovana famonjena aina sy mora ampiasaina ity !!
Jiro GE efa misotro ronono
Chesterland, OH, Etazonia
Aogositra 8th, 2019
Misaotra betsaka anao noho ny fanampiana malala-tanana ary mankasitraka ny valinteninao haingana. Tena hanome toro-hevitra ny vokatrao aho.
Enga anie 31, 2019
Ity hafatra ity dia natao ho FISAORANA LEHIBE noho ny fitaovanao manamboatra Outlook mahafinaritra. Ny mpanjifako efa niaina fahatapahan-jiro maro
Ity hafatra ity dia natao ho FISAORANA LEHIBE noho ny fitaovanao manamboatra Outlook mahafinaritra. Ny mpanjifako dia efa niaina fahatapahana herinaratra maro izay nahatonga ny Outlook pst ho lasa mpanao kolikoly. Scanpst dia tonga tamina hadisoana manondro ireo olan'ny kapila. Nandefa google an'ity hadisoana ity aho ary sendra ny vokatrao. Nametraka sy nihazakazaka ilay fitaovana izay naharitra adiny 2 vao vita aho. Ny vokatra farany dia Outlook miasa tanteraka izay haingana kokoa noho ny teo aloha! Ny mpanjifako dia mihoatra ny volana satria kaonty orinasa miankina betsaka amin'ny mailaka izany.
Misaotra anao noho ny vokatra tsara, tena hanome an-tanana izany ho an'ireo mpiara-miasa amiko IT aho. Ho fampahalalana anao dia toy izao ny tontolo iainana:
Desktop pc (maodely IBM taloha) miaraka amina CPU dual-core, ram 4Gb, Windows 7 matihanina ary Outlook 2007. PST dia eo ho eo. 4.5Gb.
Tohizo ny asa tsara azafady.
Durban, Afrika Atsimo
Febroary 18, 2019
Ny fanatsarana ny MS Office dia nianjera tamin'ny solo-sainako ary tsy maintsy mamafa sy nametraka indray aho. Nandritra ny fizotrany dia tsy nanaiky ny taloha ny Outlook.ost
Ny fanatsarana ny MS Office dia nianjera tamin'ny solo-sainako ary tsy maintsy mamafa sy nametraka indray aho. Nandritra ny fizotrany dia tsy nanaiky ny taloha ny Outlook.ost ataoko ary izaho lost ny mailako rehetra voatahiry ao anaty lahatahiry (solosaina eo an-toerana ihany). Izany dia tsy fahombiazana amin'ny anaran'ny Outlook, fa tsy ny famerenana mamorona ny sub-folder amin'ny mpizara. Taorian'ny fikorontanana 6 ora dia hitako ny tranokalanao ary alaina ny rindrambaiko, 30 minitra taty aoriana dia tsara daholo indray. Ireo mailaka rehetra azo antoka sy azo idirana.
Nosintomiko ny rindrambaiko fanamboarana ny fomba fijerinao noho ny hafatra tsy miova momba ny rakitra Outlook.pst izay tsy nakatona tsara
Nosintomiko ny rindrambaiko fanamboarana ny fomba fijerinao noho ny hafatra tsy miova momba ny rakitra outlook.pst izay tsy nakatona tsara tamin'ny fampiasana farany. Niasa lavorary ianao rindrambaiko. Ny rakitra pst dia nitombo tamin'ny 1.9gb ka hatramin'ny 2.45gm niaraka tamin'ny 'lost angon-drakitra 'izay efa azo averina ary napetraka tamina folder' naharihary 'roa (tsy natsipy tao anaty boaty fotsiny) mba hizahako. Naharitra 10 minitra latsaka ny fanarenana sy ny scan ireo entana mailaka azo.
Averiko indray fa misaotra anao nanome rindrambaiko tsara toy izany izay manao izay lazainy fa tsy misy fetra amin'ny fampiasana manokana. Manoro hevitra mafy an'ity fitaovana ity ho an'ny boaty ho an'ny mpampiasa solosaina rehetra aho.
Mpampiasa solosaina an-trano
Soso-kevitra rindrambaiko tena lehibe izay feno sy manadihady lalina mba hahitana fa voafafa sy lost mailaka. Nahavita namerina vola be aho
Soso-kevitra rindrambaiko tena lehibe izay feno sy manadihady lalina mba hahitana fa voafafa sy lost mailaka. Nahavita nanangona loharanom-baovao malaza tsy misy rindrambaiko hafa nampiasako aho. Tena tiako ny afaka mampiasa an'io rindrambaiko manokana amin'ny no cost.
Tena tsara ity rindrambaiko ity. Tena misaotra anao aho nanome anao fitaovana manan-danja toy izany (DataNumen Outlook Repair v 1.2 kinova feno) ho an'ny
Tena tsara ity rindrambaiko ity. Tena misaotra anao aho nanome anao fitaovana manan-danja toy izany (DataNumen Outlook Repair v 1.2 kinova feno) ho an'ny besinimaro ampiasaina. Ampahafantaro ahy raha afaka manome fitaovana hafa mihoatra an'io ianao.
Dubai. Emira Arabo Mitambatra
Vita tsara ilay izy.
Park City, Utah, Etazonia
Misaotra amin'ny fampidirana. Fantatro izay hatao mandritra izany fotoana izany. Sitrana almost ny ahy rehetraost mailaka. Misaotra amin'ny vokatra tsara ...
Houston, TX, Etazonia
Nahazo ny DVDRom niaraka tamin'ny zipped pst-rakitra. Afaka namoaka azy aho ary mandeha tsara daholo ny rehetra. Misaotra anao noho ny
Nahazo ny DVDRom niaraka tamin'ny zipped pst-rakitra. Azoko atao ny mamoaka azy ary mandeha tsara daholo ny rehetra, tiako ny misaotra anao noho ny karazana fanampiana tsara sy fanampiana rehetra nomenao ahy. Raha tsy ho anao sy AOR aho dia mety tsy ho sitrana ny rakitra ao amin'ilay rakitra.
Misaotra betsaka anao noho ny fanampianao - Tena tiako izany.
Mpiasa ao amin'ny Procter & Gamble
Salama, misaotra anao mamaly. Vitako ny nandamina azy io hatramin'ny mailaka voalohany, ka azafady fa nanelingelina anao izany. BTW, tiavo ny vokatra.
Azo atao ve ny mamaritra ny toerana sy ny anaran'ny fisie tsirairay ao amin'ny takelaka Fanamboarana Batch? Efa azo atao izany ao amin'ny kiheba Fanamboarana, rehefa
Azo atao ve ny mamaritra ny toerana sy ny anaran'ny fisie tsirairay ao amin'ny takelaka Fanamboarana Batch? Efa azo atao izany ao amin'ny kiheba Fanamboarana, raha tsy handrindra rakitra iray fotsiny, fa tena ilaina raha azo atao ny manitsy ny antsipirian'ny rakitra output amin'ny fanamboarana batch.
Vokatra tsara be! Sitrana AOR most amin'ireo entana avy amina rakitra 6GB PST tena lehibe. Ny andrana nataoko taloha tamin'ny SCANPST dia nahitana 500mb fotsiny!
Fotoana lasa izay dia mividy aho Datanumen Outlook Repair ary faly aho amin'izany, mampiasa azy io indraindray. Ankehitriny dia mila mamerina mailaka voafafa avy amin'ny NSF maromaro aho
Fotoana lasa izay dia mividy aho Datanumen Outlook Repair ary faly aho amin'izany, mampiasa azy io indraindray. Ankehitriny dia mila mamerina mailaka voafafa avy amina rakitra NSF Lotus Notes maromaro aho. Noheveriko fa mety hanana vokatra tsara ianao, nefa indrisy tsy manana na inona na inona ho an'ny Lotus Notes. Eny, satria manao zavatra tsara ianao, maninona a Datanumen Fanamboarana NSF? Miarahaba anao indrindra, Roberto
Misaotra Alan, niasa almost tonga lafatra ... Tsy nanantena an'izany aho. Misaotra indrindra. Helmut
Misaotra betsaka anao nanohana anao --- niasa tamin'ny famoronana profil vaovao fotsiny.
Te hilaza fotsiny aho Misaotra anao noho ilay rindrambaiko.
Ny rakitra data Outlook dia toa mostly raikitra.
Nila nandinika sy namafa fampidirana taonina aho
Mila mijery sy mamafa voafafa an-taonina aho, saingy heveriko fa tafarina ahoost ny data-ko.
Tsy ho fantatro izay ananako lost maharitra!
Naperville, IL, Etazonia
Lafo nefa nanao ny zavatra rehetra nampanantenaina ao anatin'izany ny fakitera
Ka ohatrinona izany? Tena soso-kevitra!
Vancouver Avaratra, BC, Kanada
Advanced Outlook Repair nanamboatra 19GB Outlook 2007 .pst tanteraka miaraka amina lahatahiry maro mihoatra ny 15 taona. Nanjary simba izany rehefa avy nisedra mafy
Advanced Outlook Repair nanamboatra 19GB Outlook 2007 .pst tanteraka miaraka amina lahatahiry maro mihoatra ny 15 taona. Nanjary simba taorian'ny fanidiana mafy, ary tsy hisokatra, na amin'ny fomba azo antoka aza. Reko ny momba ny fitaovanao avy amin'ny "chcw" tao amin'ny ExpertsExchange.com sy avy amin'ny latabatra fampitahana isan-jato isan-jato eo amin'ireo fitaovana amin'ny Datanumen.site. Izaho dia nanao kopian'ny .pst, ary nanandrana tsy nisy vintana tamin'ny Microsoft scanpst.exe. Ny fitaovan'ny antoko faha-3 dia nanampy taona maro lasa izay Outlook Express fiovam-po ka nijery an-tserasera aho. Advanced Outlook Repair no hany tokana nahazo fanamarihana tsara momba ny tranga sarotra, ary naneho ohatra amin'izany izy ireo, ka dia nahita coupon aho dia nividy azy. Ny pass voalohany dia nilaza fa ny loharano voalohany dia nosokafana loharano hafa (na dia averina aza). Avy eo dia nanandrana azy nanohitra ilay kopia aho, ary tao anatin'ny minitra vitsy (20% eo ho eo) dia nisokatra ny Outlook - miaraka amin'ny lahatahiry sy mailaka feno. Natahotra ahy izany satria noheveriko fa nanohina zavatra aho ary nakatoko. Minitra vitsy taty aoriana, izany
Vahaolana amin'ny fanarahana ny lesoka mahazatra sy ny olana amin'ny rakitra PST Outlook
Fitaovana fanamboarana boaty tsy afaka mamerina entana
Hangs fanamboarana Inbox
Ny rakitra dia tsy rakitra fisie manokana
Hita ny lesoka tao amin'ilay rakitra xxxx.pst…
Adinoy na very ny teny miafinao noho ilay fisie PST misy encrypt.
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Outlook Repair v8.5
Tohano ny 32bit sy 64bit Outlook 97 ka hatramin'ny 2019 ary Outlook for Office 365.
Fanohanana hamerenana ireo mailaka, lahatahiry, posts, kalandrie, fanendrena, fangatahana fihaonana, fifandraisana, lisitra fizarana, asa, fangatahana asa, diary ary naoty ao amin'ny rakitra PST. Ny fananana rehetra, toy ny lohahevitra, vatan'ny hafatra, hatramin'ny, cc, bcc, daty sns.
Fanohanana hamerenana ireo mailaka amin'ny endrika tsotra, endrika RTF ary HTML.
Fanohanana hamerenana ireo zavatra natsofoka, toy ny mailaka hafa, Excel Worksheets, Word documents, sns.
Fanohanana hanamboarana most amin'ireo rakitra PST izay fitaovana fanamboarana Inbox (antsoina koa hoe Inbox tool na scanpst.exe) tsy mahavita manamboatra ary tsy afaka manamboatra ireo fitaovana fanamboarana PST hafa.
Tohano hamerenana ireo entana Outlook voafafa, ao anatin'izany ny hafatra mailaka, lahatahiry, posts, kalandrie, fanendrena, fangatahana fihaonana, fifandraisana, lisitra fizarana, asa, fangatahana asa, diary ary naoty.
Fanohanana hamerenana ireo rakitra 2GB PST be loatra.
Tohano hamerenana ireo rakitra PST lehibe kokoa amin'ny 16777216 TB (Ie 17179869184 GB).
Fanohanana amin'ny famerenana ireo rakitra PST voaaro amin'ny teny miafina, na ny encryption azo tsindriana na ny encryption avo (na ny encryption tsara indrindra) dia tohanana. Ny rakitra PST dia azo averina na dia tsy manana ny teny miafinao aza ianao.
Tohano hanovana ny rakitra PST avy amin'ny endrika Outlook 97-2002 ho lasa Outlook 2003-2019 / Outlook ho an'ny endrika Office 365, ary Vice versa.
Fanohanana hamoronana rakitra PST raikitra amin'ny endrika Outlook 97-2002 sy ny endrika Outlook 2003-2019 / Outlook ho an'ny Office 365.
Fanohanana hamerenana ny angon-drakitra ao anaty rakitra PST simba na simba izay tsy azon'ny scanpst sy ireo fitaovana fanamboarana PST hafa.
Tohano hanamboarana ny lesoka "Tsy afaka mamindra ny entana" ao amin'ny fisie Outlook PST.
Fanohanana mba hamahana ny olana izay i Outlook PST /OST miadana na tsy mamaly ny fisie.
Kitapo feno mba hifehezana ny fizahana, ny fanarenana ary ny fizarana output.
Fanohanana hamerenana ny angona Outlook avy amin'ny rakitra VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) tsy simba na simba (*. Vmdk), fisie Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. Vhd), rakitra Acronis True Image (*. Tib), Norton Ghost fisie (*. gho, * .v2i), fisie Windows NTBackup (*.bkf), Fisie sary ISO (*. Iso), rakitra sary Disk (*. Img), fisie sary CD / DVD (*. Bin), fisie alikaola 120% Mirror Disk File (MDF) (*. Mdf) ary fisie sary Nero (* .nrg).
Tohano hamerenana ny angon-drakitra Outlook amin'ny temporary fisie noforonin'i Outlook rehefa misy ny voina data.
Fanohanana amin'ny fanamboarana ireo rakitra PST amin'ny haino aman-jery maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Tohana hanamboarana antontan-taratasy PST maloto.
Tohano hahitana ny toerana misy ireo rakitra PST hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana, araka ny mason'ny fikarohana sasany.
Tohano ny fampidirana miaraka amin'ny Windows Explorer, amin'izay azonao atao starmora foana ny manamboatra PST miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer.
Tohano ny asa fitarihana
Fanohanana amin'ny fanamboarana rakitra PST simba amin'ny alàlan'ny masontsivana fibaikoana.
mampiasa DataNumen Outlook Repair hamerenana ireo rakitra PST Outlook maloto
Rehefa simba na simba ny fisiefanao Outlook PST ary tsy azonao atao ny manokatra azy ireo amin'ny Microsoft Outlook dia afaka mampiasa ianao DataNumen Outlook Repair mba hanaraha-maso ireo rakitra PST ary hamerenana ireo angona avy amin'ny fisie arak'izay azo atao.
Fanamarihana: Alohan'ny hanamboarana rakitra PST simba na simba amin'ny DataNumen Outlook Repair, akatony azafady ny Microsoft Outlook sy ireo rindranasa hafa mety manova ny fisie PST.
Safidio ny fisie Outlook PST rakitra simba na simba hanamboarana azy:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny fisie PST na tsindrio ilay bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra. Azonao atao koa ny manindry ny bokotra hahitana ny rakitra PST hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Raha fantatrao ny kinova Outlook ny rakitra PST loharano azo amboarina, dia azonao atao ny manondro azy ao anaty boaty combo eo akaikin'ny boaty fanovana rakitra loharano, ny endrika mety hiseho dia ny Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010, Outlook 2013-2019 / Office 365 PST fisie sy Outlook 2013-2019 / Office 365 OST rakitra. Raha avelanao ho "Auto Determined" ilay format, dia DataNumen Outlook Repair dia hanao scan ny rakitra PST loharano hamaritana ny endriny ho azy. Na izany aza, mila fotoana fanampiny izany.
Default (nitranga in- DataNumen Outlook Repair dia hitahiry ireo angon-drakitra voaangona ao anaty rakitra vaovao antsoina hoe xxxx_fixed.pst, izay xxxx no anaran'ny fisie PST loharano. Ohatra, ho an'ny rakitra PST loharano Outlook.pst, ny anarana default ho an'ny fisie raikitra dia Outlook_fixed.pst. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Azonao atao ny misafidy ny endrika fisie ny PST raikitra ao anaty boaty combo eo akaikin'ny boaty fanovana rakitra voafetra, ny endrika mety hitranga dia ny Outlook 97-2002 sy ny Outlook 2003-2019 / Office 365. Raha avelanao ho "Auto Determined" ny format, dia DataNumen Outlook Repair hiteraka ny rakitra PST raikitra mifanaraka amin'ny Outlook napetraka ao amin'ny solosaina eo an-toerana.
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen Outlook Repair start scanning sy fanamboarana ny rakitra PST loharano. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana, raha afaka amboarina soa aman-tsara ny rakitra PST loharano dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Ankehitriny ianao dia afaka manokatra ny fisie PST raikitra amin'ny Microsoft Outlook. Hie ny lahatahiry manontolorarchy dia haverina haverina ao anaty rakitra PST raikitra ary ny mailaka sy ny zavatra hafa dia haverina ary apetraka amin'ny lahatahiry voalohany. Ho an'ny lost & zavatra hita, hapetraka ao anaty lahatahiry Recovered_Groupxxx izy ireo.
DataNumen Outlook Repair 8.5 dia navoaka tamin'ny 26 Janoary 2021
Tohano ny Espaniôla, frantsay, alemana, italianina, portogey, rosiana, japoney, koreanina ary sinoa tsotra.
DataNumen Outlook Repair 7.9 dia navoaka tamin'ny 9 Janoary 2021
Tohano amin'ny fiteny maro ao amin'ny GUI.
DataNumen Outlook Repair 7.8 dia navoaka tamin'ny 8 Desambra 2020
DataNumen Outlook Repair 7.6 dia navoaka tamin'ny 31 Oktobra 2020
DataNumen Outlook Repair Navoaka tamin'ny 7.5 Aogositra 8 ny 2020
DataNumen Outlook Repair 7.2 dia navoaka tamin'ny 19 Jona 2020
DataNumen Outlook Repair 7.1 dia navoaka tamin'ny 22 Janoary 2020
DataNumen Outlook Repair 7.0 dia navoaka tamin'ny 30 Desambra 2019
DataNumen Outlook Repair Navoaka tamin'ny 6.9 septambra 27 ny 2019
DataNumen Outlook Repair 6.8 dia navoaka tamin'ny 29 Jona 2019
DataNumen Outlook Repair 6.6 dia navoaka tamin'ny 28 martsa 2019
Mamolavola endrika ny milina fanamboarana batch.
Fanohanana hamonjenanao ny kitay fanamboarana batch.
DataNumen Outlook Repair 6.5 dia navoaka tamin'ny 28 Desambra 2018
Tohano ny Outlook 2019.
DataNumen Outlook Repair 6.0 dia navoaka tamin'ny 12 Oktobra 2018
Omeo fanaraha-maso bebe kokoa amin'ny hazo fanamboarana.
DataNumen Outlook Repair Navoaka tamin'ny 5.6 Jona 23 ny 2018
Tohano ny Outlook ho an'ny Office 365.
DataNumen Outlook Repair 5.5 dia navoaka tamin'ny 29 martsa 2018
Tohano hamerenana ireo lahatahiry sy hafatra voafafa.
Tohano ny Outlook 2016.
DataNumen Outlook Repair Navoaka tamin'ny 5.3 Jolay 16 ny 2015
Tohano hanarenana ireo lesoka “Tsy afaka mamindra ireo entana” ao amin'ny fisie Outlook PST.
DataNumen Outlook Repair 5.2 dia navoaka tamin'ny 23 septambra 2014
Ahena ny fanjifana fahatsiarovana.
DataNumen Outlook Repair 5.1 dia navoaka tamin'ny 9 Jolay 2014
DataNumen Outlook Repair 4.5 dia navoaka tamin'ny 15 aprily 2014
Fanohanana hamerenana ny angona Outlook avy amin'ny rakitra VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) tsy simba na simba (* .vmdk), fisie Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (* .vhd), rakitra Acronis True Image (* .tib), Norton Ghost fisie (* .gho, * .v2i), fisie Windows NTBackup (*.bkf), Fisie sary ISO (* .iso), rakitra sary Diska (* .img), fisie sary CD / DVD (* .bin), fisie alikaola 120% Mirror Disk File (MDF) (* .mdf) ary fisie sary Nero (* .nrg).
DataNumen Outlook Repair 4.1 dia navoaka tamin'ny 12 Febroary 2014
DataNumen Outlook Repair 4.0 dia navoaka tamin'ny 12 Desambra 2013
Tohano ny Microsoft Outlook 2013.
DataNumen Outlook Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 28 aprily 2009
Amboary ny bibikely ao anaty hafatra diso.
DataNumen Outlook Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 5 Jolay 2008
DataNumen Outlook Repair 1.5 dia navoaka tamin'ny 28 Mey 2008
DataNumen Outlook Repair 1.4 dia navoaka tamin'ny 7 Mey 2007
Tohano ny Microsoft Outlook 2007.
DataNumen Outlook Repair 1.2 dia navoaka tamin'ny 9 Oktobra 2006
Tohano ny fomba fanarenana mandroso.
DataNumen Outlook Repair 1.1 dia navoaka tamin'ny 31 desambra 2005
Fanohanana mamantatra ny fisie rakitra PST loharanom-pahalalana ho azy.
Fanohanana hamaritana ny endrika fivoahan'ny PST output ho azy araka ny kinova an'ny Outlook napetraka ao amin'ny solosaina eo an-toerana.
Tohano hahitana sy hisafidy ireo rakitra PST hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana, araka ny mason'ny fikarohana sasany.
DataNumen Outlook Repair 1.0 dia navoaka tamin'ny 19 Novambra 2005
Fitaovana matanjaka hamerenana rakitra fisie Microsoft Outlook (.pst) manimba.
Ampodio ireo hafatra sy zavatra hafa avy amin'ny rakitra fitahirizam-bokatra Microsoft Exchange tsy misy kamboty na simba (.ost)
Amboary sy avereno ny rakitra Microsoft Word maloto (.doc sy .docx fisie).
Amboary ary avereno ny rakitra Microsoft Excel xls, xlw ary xlsx simba na simba.
Amboary sy avereno ny angon-drakitra Microsoft Access maloto (fisie .mdb sy .accdb).